Hondo yekutinhira ine chiitiko chitsva chepamhepo chakamirira iwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Yemberi Tekinoroji pamhepo chiitiko chemavhidhiyo emavhidhiyo War Thunder inomuka uye ichimhanya nekuda kwekuedza kweGaijin Varaidzo. Ichavhura chiitiko kuburikidza neSteam uye iyo zviri pamutemo webhusaiti yemutambo. Nenzira iyoyo, vatambi vechikwata ichi vachave nemukana wekuwana zvitsva zvisingawanikwe kusvika munaApril 12.
ari prizes Vachave muJapan JDS Yūgure muparadzi, yekutanga vhezheni yeGerman F-4F murwi wejeti, American XM8 mwenje tangi, uye Soviet SU-76D SPG. Zvese izvo zvekutora chikamu muhondo muHondo Kutinhira kuunganidza zviwanikwa, zvombo, uye mapurani ekuvaka futuristic Minotaur tank. Iyo futuristic tangi iwe yaunogona zvakare kuchinjana kune ina asingawanzo mota ataurwa pamusoro.
Dai wanga usina kuvaziva, iyo SU-76D yakanga iri yekuedza tangi muparadzi aine yakaderera silhouette, ndiro nhumbi, uye dhiziri injini. Yakanga yakagadzirirwa mainjiniya eSoviet yeHondo Yenyika II, asi yaisazoenda mukugadzirwa kwakateedzana nekuda kwematambudziko ekugadzira enjini uye nesimba rayo guru.
Kana ari JDS YugureYaive American Fletcher-kirasi yekuparadza, asi Japan yaizoigamuchira mukupera kwema1950. Vakaigadzirisa ndokuishandisa seyikosi yekudzidzira uye antisubmarines. Yakatakura 5 mbiri mbiri 40mm Bofors pfuti.
XM8 AGS yaive American light tangi bvunzo unit. Yakagadziridzwa mukutanga kwema90s mukuyedza kutsiva maturakiti eM551 Sheridan matangi. Asi chete zvimiro zveichi muchina wehondo zvaivepo. Vakaisa pfuti inokwana 35mm XM105 pfuti uye 550CV injini yedhiziri.
Pakupedzisira, iyo F-4F ChiGerman yaive yekutengesa kunze kwenyika kune inozivikanwa Phantom murwi ndege yeGerman Air Force. Yakanga iine simba senge yekutanga American musiyano uye iwe waigona kusarudza kubva kwakasiyana siyana zvombo: mabhomba anosvika ku2.000 lbs, Mighty Mouse, Zuni maroketi, Vulcan 20mm, uye zvitatu zvakagadziridzwa zveSidewinder mhepo-kune-mhepo makombuta (AIM -9B FGW-2, AIM-9E uye AIM-9J).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Hondo yekutinhira ine chiitiko chitsva chekugadzira online
oh mudiwa warthunder wangu ndazvishaya. Sezvo ivo vakasiya opengl uye vakamanikidza kushandiswa kwevolkan handichakwanise kuishandisa, nekuti komputa yangu yachembera uye magirafu angu haatsigire vulkan uye ini handidi kudhawunirodha mutambo uzere zvakare (inova yakawanda magigs) yeWindows nekuti zvinosuwisa Ini handina fiber yemagetsi.